कोरोना संक्रमीत भइ अस्पतालमा भर्ना रहेका प्रा.डा. गोविन्द केसि ले भावुक हुँदै लेखे यस्तो मन छुने स्टाट्स । – AB Sansar
कोरोना संक्रमीत भइ अस्पतालमा भर्ना रहेका प्रा.डा. गोविन्द केसि ले भावुक हुँदै लेखे यस्तो मन छुने स्टाट्स ।
November 14, 2020 adminLeaveaComment on कोरोना संक्रमीत भइ अस्पतालमा भर्ना रहेका प्रा.डा. गोविन्द केसि ले भावुक हुँदै लेखे यस्तो मन छुने स्टाट्स ।
“म संक्रमित भएपछि प्रम केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको स्वास्थलाभको शुभकामना सन्देशको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले मेरो उपचार खर्च बेहोर्छु भनेको सन्दर्भमा भने मेरो उपचार खर्च म आफैँ बेहोर्छु बरु सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको कर्तव्य पूरा गरोस् । *****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
संक्रमित विपन्न र दूरदराजका नागरिक जसलाई निःशुल्क उपचार आवश्यक छ उनीहरुले अहिलेसम्म उपचार पाउन सकेका छैनन् । त्यसो हुनाले अझै पनि सरकारको ध्यान व्यक्ति विशेषको उपचार खर्च बेहोर्नु भन्दा सबै विपन्न नागरिकको उपचार खर्च बेहोर्नेमा हुनुपर्दछ।
हामीसँग पटक पटक गरिएका सम्झौता कार्यन्वयन भएको भए देशका दूरदराजदेखि सबै भेगमा ठूला सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज बन्ने थिए। साथै, त्यहाँका नागरिकले कोरोना साथसाथै सम्पूर्ण रोगहरुको गुणस्तरीय, निःशुल्क, सर्वसुलभ स्वास्थ सेवा पाउने थिए। तसर्थ हामीसँग १९ औँ सत्याग्रहमा भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यन्वयन गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। मेरो स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएकोमा फेरि पनि तपाईंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। “*****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
साह्रै दुखद खबर : नेपाल मा आज लक्ष्मी पुजाको दिन यति धेरै संक्रमितको कोरोनाले लियो ज्या न !
प्रधानमन्त्रीको आमसभा चलिरहँदा पानी परेपछि…
December 17, 2020 December 18, 2020 Ab-संसार
अन्ततः रहेनन कन्चन, लाख कोसिस गर्दापनि ब’चाउन स’किएन’